Rickets: लक्षण, रोकथाम र उपचार
Rickets - प्रारम्भिक चरणमा सबै आमाबाबुले देखि टाढा छ भनेर पहिचान गर्न एक रोग। कारण रूपमा प्रकट rickets छ: पहिलो, तपाईंले मात्र भन्दा वयस्क यो रोग जडान गर्न सक्छन् जो बच्चा, को व्यवहार केही परिवर्तन देख्न सक्छौं।
Rickets, लक्षण जो पहिले नै बच्चा जीवन को पहिलो महिनामा प्रस्ट छन्, भिटामिन डी को आफ्नो शरीर मा कमी बिस्तारै रोग विकास को परिणाम छ: बच्चा, बेचैन डरलाग्दो र tearful हुन्छ, यो slightest Knock वा हल्ला मा shudders। यसरी धेरै शिशुहरू मा व्यवहार किनभने, आमाबाबुले अक्सर यी लक्षण गर्न महत्त्व संलग्न छैन। तिनीहरूले चेतावनी अन्य सुविधाहरू, rickets को प्रारम्भिक चरण को विशेषता हुन सक्छ: धेरै बच्चा Sweats (विशेष गरी Palms, तलवों र खोपडी), यो nape पर्छ। मुख्यतया हड्डी मा, भिटामिन डी को कमी असामान्य क्याल्सियम-फस्फोरस चयापचय निम्त्याउँछ रूपमा - कुनै कार्य लिइएको छ भने, केही हप्ता पछि, यो देखिने र अन्य परिवर्तनहरू बन्नेछ।
यो चरण मा रोग को लक्षण थप चिन्न हो: जब yielding बच्चाको बाल विशेषज्ञ टिप्पणीहरू देखि हेरिएको को खोपडी हड्डी जोडहरुको मा; टाउको को कि बिस्तारै विरूपण गठन गरिन्छ ताकि - occipital हड्डी नरम गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यी संग rickets को संकेत, रोग को धेरै सुरुमा छन् लक्षण जो छैन पहिचान गर्न त सजिलो छ, यो निदान गर्न सजिलो छ। छाप वा, विपरीत मा, sternum को उभाडना - समानान्तर विरूपण खुट्टा हड्डी (अक्षरहरू "हे" वा "X") र छाती विकास। एक बच्चा rickets को 6-8 पुरानो भन्दा महिना, पहिले नै स्पष्ट भएका थिए, जो को manifestations, करङहरु र कलाई ( "मोती") मा हड्डी nodules को गठन गर्न र निधारमा र मन्दिर (frontal वा अस्थायी hillocks) मा हुन सक्छ।
बच्चा, rickets भोगिरहेका बढ्दै बुरा: लेट, अधिक रोल गर्न बस्न खडा र हिंड्न सुरु हुन्छ। उहाँले लामो overgrown Fontanelle छ; पछि अन्य बच्चाहरु भन्दा, teething। जसको लक्षण Rickets, पर्याप्त अप्रिय छन्, र अक्सर मेरुदण्ड एक झुकाव निम्त्याउँछ: scoliosis, lordosis वा kyphosis। यो कारण पनि हड्डी मात्र एक मृदुकरण, तर पनि hypotonia (कम मांसपेशी टोन) छ। उन्नत रोग पनि पेट उभडा ( "भ्यागुतो-पेट") चरण, आन्तरिक अङ्गहरू समारोह को अवरोध गर्न प्रमुख अवलोकन छ; अक्सर विकास hypochromic रक्तअल्पता। गंभीर मा rickets संग बच्चाहरु, एकदम पछि psychomotor विकास मा ठंड।
Rickets प्रयोगशाला अनुसन्धान डाटा बच्चा को परीक्षा को आधार, साथै मा निदान छ, जसमा मुख्यतया शरीर मा क्याल्सियम र फस्फोरस चयापचय द्वारा निर्धारित छन्। को अंतर निदान त्यहाँ पनि क्याल्सियम-फस्फोरस चयापचय को उल्लंघन हो जसमा केही वंशानुगत रोग, तथाकथित rickets, संग बाहिर छ।
rickets उपचार भिटामिन डी (videhol, calciferol), सामान्यतया अन्य भिटामिन संग संयोजन मा प्रशासन comprises - ए, बी, सी र ई रोग को उन्नत प्रकारका देखाइएको छ जब restorative प्रकृति अर्थ र शरीर मा चयापचय प्रक्रियाहरू सुधार (जस्तै, asparkam, पोटासियम orotate) साथै क्याल्सियम पूरक रूपमा। बच्चा मालिश, भौतिक चिकित्सा अभ्यास को एक पाठ्यक्रम निर्धारित छ। एक स्नान रूपमा उपयोगी पाइन निकाल्ने र समुद्र नुन rubdown। समय सबै चिकित्सा सिफारिसहरू राज्य बच्चा संग उपचार र अनुपालन थालेका गर्दा markedly 30-45 दिन भित्र सुधार, र त्यसपछि आउँछ र अन्तिम पुन:। यस हस्तान्तरण rickets यस चरण मा मात्र हड्डी परिवर्तनहरू संरक्षित देखाउँछ।
rickets को रोकथाम (- यसको हदसम्म आधारमा 2000-5000 IU, rickets को उपचार को लागि) एक शिशु सामान्यतया 500-1000 IU लागि आफ्नो दैनिक दर: भिटामिन डी लिइरहेको छ। "Akvadetrim" - सबैभन्दा बच्चाहरु यसको जलीय समाधान discharged। दबाइ को व्यक्तिगत घृणाको: यो एक निर्धारण हुनुपर्छ बिना, एकदम अहानिकारक र प्रभावकारी, तर आफ्नै बच्चा यसलाई दिन छ। शिशुहरू र अनुपालन मा rickets को पछि विकास एक गर्भवती महिला आहार र हिँड्छ, साथै यसको स्वागत Multivitamin तयारी मदत गर्नेछ जोगिन।
नियमित रूपमा समय तालिका अनुसार, यो पनि हुनुपर्दछ बाल विशेषज्ञ जानुहोस्: आमाबाबुले अझै नदेखिन सक्छ जो rickets, लक्षण, यो अक्सर शारीरिक परीक्षा समयमा पत्ता छ। एक समय तरिका मा रोग को प्रारम्भिक निदान आफ्नो उपचार सुरु र अप्रिय परिणाम जोगिन मदत गर्नेछ -, विशेष खतरनाक र भद्दा हड्डी deformations मा प्राप्त कि पछि को छुटकारा लगभग असम्भव हुनेछ।
ऐंठन को छुटकारा प्राप्त किन खुट्टा cramped र रात गर्न?
खुट्टा दुखाइ मा कण्डरा, tearing, stretching
छाला - एक खतरनाक रोग
एक अंतरंग ठाउँमा Herpes। रोग कसरी चिन्न।
Postmiokardichesky कार्डियो: कारणहरू, लक्षण र उपचार
Meniere गरेको सिंड्रोम - यो एक वाक्य छ!
"Izhitsa" - चिन्ह पुरानो चर्च Slavonic वर्णमाला आउँछ
कसरी घर मा पानी मैनीक्योर बनाउन: निर्देशन
मलम "Dermozolon": प्रयोग, संरचना, analogs, समीक्षा लागि निर्देशन
एक हजार guises एक पकवान: बेकन र croutons संग सलाद
आफ्नो खुट्टा मा भास्कुलर नेट: कारणहरू र उपचार को विशेषताहरु को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी
डेनमार्क आकर्षण। विशेष गरी डेनमार्क। संसारको नक्सामा डेनमार्क
प्राचीन ग्रीक दर्शन
वाक्यांश क्रिया ले: सुविधाहरू, उत्तर संग उदाहरण र अभ्यास को प्रयोग
जोर्डन, लाल समुद्र मा होटल, "सबै-समावेशी": समीक्षा, फोटो
मास्को जहाँ Shabolovskaya मेट्रो?
महिलाहरु को लागि triceps लागि अभ्यास। को flabbiness छुटकारा रही
को भाग्य परिवर्तन गर्न समय - वर्ष को निकटतम दिन